Wasaaradda caafimaadka ee Puntland oo maanta guddoontay 6 tan oo dawo ah. – Radio Daljir
Wasaaradda caafimaadka ee Puntland oo maanta guddoontay 6 tan oo dawo ah.
Garoowe, April 03 – Wasaaradda caafimaadka ee dowladda Puntland ayaa manta si rasmi ah ula wareegtay deeq dawo ah oo ay Puntland u soo dirtay dowladda Imaaraadka Carbeed. Deeqdani dawada ah ayaa gaadhaysa 6 tan, kuna jirta 530 kartoon, kalana ah 47 nooc.
Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Puntland Dr Cali C/hi Warsame oo deeqdan dawo kula wareegey cusbitalka guud ee magaalada Garoowe, ayaa sheegey in ay kaalmadan dawo ee ka timid Imaaraadka Carbeed ay ku soo beegantay xilli baahida loo qabo ay taagantahay, isla markaana dadka baahida u qaba sidii loogu talo galay loo siin doono.
Wasiirka caafimaadka ee dowladda Puntland oo ku hadlayay magaca guud ee dowladda Puntland ayaa dawadan uga mahadceliyay dowladda Imaaraadka Carbeed, gaar ahaana hay?adda Sheekh Khaliifa Zaayid ee hawlaha aadiminimo.
Deeqdan dawo ee soo gaadhay wasaaradda caafimaadka ee Puntland ayaa ku soo beegantahay xilli xarumaha adeegyada caafimaad ee Puntland ay dareemayaan dawo yari soo wajahday.
Waa deeqdii labaad ee muddo todobaadyo ku siman ay dawladda Imaaraadka Carabtu deeq soo gaarsiiso Puntland iyada oo dhawaan gacan gargaar ka gaysatay abaaraha baahsan ee ka taagan degaannada Puntland.